Ajjeechaa Jumlaa ummata Oromoorratti Raawwatamaa Jiru Kan Dhaabsisu Qabsoo Qofa | QEERROO
jedhaman hidhaa keessatti dararaa turuun gaafa Caamsaa 3, 2022 gara Daangaa Goojjam, Sulula Abbayaatti geessuun bakka Alantee jedhamutti ajjeesuun allayyaa keessatti gatanii maatiin akka reeffa hin arganne gochuudhaan bineensa nyaachisan. Guyyuma kana aanuma kana bakka Bocceessaa jedhamu qofatti waraanni faashistii Abiy Ahmad manneen Qonnaan Bultootaa Oromoo 28 ol qabeenya guutuu waliin gubuun barbadeesseera. Guyyaa itti aanu aanuma kana keessatti namoota meesha maleeyyii 8 itti dabaluudhaan bakka tokkotti ajjeesan. Godina kana aanota akka Kuyyuu, Hidhabuu Abootee fi Yaayyaa Gullallee keessatti manni fi qabeenyi ummataa gubachuu fi ummanni siiviliin guyyuu ajjeefamaa jira.
Waraanni murna PP kun gocha badii kana itti fufuun godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa ganda Laayyoo Qundhii keessaa daraggoota lama kanneen: Kidaanee Ejersaa Tunuu fi Nugusee Mangashaa Baarudaa jedhaman qabuun erga hidhanii daraaraa turaniin booda gaafa Caamsaa 4, 2022 ganda Gurraachuu jedhamu geessuun ajjeesuun maatiin akka reeffa hin kaasnellee dhorkan
Haaluma wal fakkaatuun godina Matakkal keessattis waraanni abbaa irree Abiy Ahmad fi hidhattoonni Amaaraaummata Oromoo irratti lola labsuun namoota nagayaa ajjeesuu, manneen fi qabeenya ummataa gubuu fi ummata qe’ee isaarraa buqqisuu akka malee jabeessanii jiru. Haaluma kanaan Ebla 29, 2022 Godina Matakkal aanaa Dibaaxii ganda Qorqaa bakka Suukkan jedhamutti waraanni PP fi faannoon Amaaraa namoota: Jirraa Getaachoo fi Abbee Gammachuu kan jedhaman mana isaanii keessaa gad baasuun rasaasa itti roobsuun ajjeesaniiru. Gaafa Caamsaa 2, 2022 Aanuma kana ganda Gaalessaa bakka Geeshee jedhamutti nama Abbiyyee Taganyee jedhamuu fi aanaa Bulan ganda Goongoo bakka Fixii jedhamutti nama Baayisaa Taaddalaa jedhamu ajjeesan. Aanaa Dibaaxii ganda Caancoo keessattis Ebla 28, 2022 abbaa ijoollee kan tahe Obbo Habtaamuu Yaadataa kan jedhamu waraana shiftaa PP tiin ajjeefameera.
Godina kana keessatti ummanni kumootaan lakkaawamu qe’ee isaarraa buqqa’uun magaalaa fi gandoota baadiyyaa keessatti walitti guuramee jireenya akkaan hamaatiif saaxilamee jira. Mana maleeyyii tahuun waan nyaatanii fi dhugan dhabanii rakkoo hamaa keessatti kufaniiru. Matakkal, aanaa Dibaaxii keessatti ummanni ganda Somboo Siree bakkoota akka Daalattii, Abbaa Lataa, Abbaa Manduu, Daakkinoo fi Jingin keessaa guutummaatti waraana shororkeessaa PP tiin qe’ee irraa buqqifamee jira. Ganda Qorqaa keessaa: bakka: Calliyaa, Suukkan, Amuruu, Daallee Waayyuu, Daallee Dabaqqaa, Daallee Taabor, Boonfoo fi Diimtuu keessaa guutummaatti waraana PP tiin buqqa’uun qabeenyaa fi qe’ee isaanii gatanii wiirtuu ganda Qorqaa mana barumsaa keessa qubatanii rakkoo hamtuu keessa jiru. Aanuma kana ganda Gaalessaa bakkoota akka Jajjaba Gissaa, Geeshee fi Gama Garbii keessaa buqqa’uudhaan magaalaa Gaalessaa keessatti beela, hongee fi qorraan rakkataa jiru. Ganda Caancoo keessaas bakka Gish Gaaraa fi Lakkuu Xeephaa keesaa ummanni guutummaatti buqqa’uun magaalaa Gaalessaa keessatti gidiraa ulfaataaf saaxilamanii juru.
Ganda Tuksii Gambeel fi Giiphoo keessaas ummanni hundi buqqa’uun magaaluma Gaalessaa keessatti rakkataa jiru. Ummanni buqqa’e kun irra caalaan manni isaa gubatee qabeenyi isaa waraana kanaan saamameera. Daa’imman, maanguddootaa fi haadholiin ummata buqqa’e kana keessatti baayyinaan argamu. Godina Matakkal aanaa Dibaaxii keessatti manneen ummataa waraana Abiy Ahmadiin guyyaa tokkotti gaafa Ebla 26, 2022 kan gubatan keessaa muraasni kan namoota armaan gadiiti.
Ganda Boonfoo keessatti:-
2. Aagaa Kabbadaa
3. Kumarraa Kabbadaa
4. Qixxeessaa Kabbadaa
5. Abbabbaa Ayyaanaa
6. Lammeessaa Tolasaa
7. Hundarraa Abbabaa
1. Abiyoot Taaddasaa
2. Balaachoo Mazgabuu
3. Addisuu Masgabuu
4. Mangashaa Disaasaa (abbaa)
5. Nigaatuu Mangashaa (ilma)
6. Gusoo Mangashaa (ilma)
7. Jirraa Mangashaa (ilma)
8. Hiikaa Mangashaa (obboleeyyan)
9. Taarraqaa Mangashaa (obboleeyyan)
10. Tasfaayee Taaddasaa
Godina Matakkal aanaa Dibaaxii gandoota hedduu keessaa ilmaan Oromoo, abbootii Gadaa, maanguddootaa fi haadholii dabalatee namoonni dhibbootaan lakkaawaman qabamuun magaalaa Gaalessaa keesatti hidhamuun dararamni ulfaataa irra gahaa jira. Maatiin dhaqee dubbisuu hin danda’u. Reebichii fi hiraarsi hamaanis irratti raawwatamaa jira.
Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Sichaawoo keessatti gaafa Ebla 30, 2022 daa’ima waggaa 12 Carraa kan jedhamu waraana Abiyyiitiin gara jabeenyaan ajjeefame. Aanuma kana ganda Yaarer keessattis Caamsaa 5, 2022 daa’ima umrii kanaan gitu Roobaa kan jedhamu haala wal fakkaataatiin ajjeefame. Guyyuma kana Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratootti waraanni PP barattoota 3 daree barnootaa keessaa gad baasuun ajjeeseera. Lixaa Shaggar aanaa Amboo ganda Haaroo Xiroo keessattis guyyuma kana maanguddoo waggaa 70 olii Obbo Nagaasaa Tolasaa ajjeesan. Wallagga Lixaa aanaa Begii magaalaa Kobor keessattis ijoolleen ol guddattuu Seefuu Malaakuu gaafa Caamsaa 6, 2022 waraana shororkeessaa dhala namaaf rifaasuu hin qabne kanaan ajjeefameera.
Ajjeechaa fi hidhaa jumlaa, manaa fi qabeenya ummataa gubuu fi ummata qe’ee irraa buqqaasuun guutummaa. Oromiyaa keessatti waggoota afran dabran kanaaf osoo walirraa hinn murna abbaa irree Abiy Ahmadiin hoogganamuun ummata keenyarratti raawwatamaa jira.
Cunqursaa fi gabrummaa saba kana ofiirraa dhabamsiisuun biyya walabaa Oromiyaa ijaarrachuuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo finiinsuuf of qopheessuu qaba. Waraana Bilisummaa Oromoo tumsuu fi humneessuun cinaatti Qeerroon ummata Oromoo dammaqsee sirna gabroomsaa ofirraa kaasee mirga abbaa biyyummaa isaa mirkanerffachuu qaba. Ummanni keenya barumaan mana isaa keessatti, qe’ee isaarratti ajjeefamuu hin qabu. Qabsoo hadhooftuu geggeessuudhaan sirna jumlaan nu ajjeesu hundeedhaan buqqisuudhaan gabrummaatti xumura gochuun yeroon isaa amma. Qonnaan bultoonni, horsiise bultonni, daldaltoonni, dafqaan bultoonni, barattoonni fi hojjettoonni dhaabbilee barnootaa, hojjettoonni manneen hojii garagaraa, ilmaan Oromoo biyya kessaa fi biyya hambaa hundi waan dandeessaniin Qabsoo Bilisummaa Oromoo tumsuudhaan saba Oromoo roorroo jalaa baasuuf dirqama Oromummaan isinirraa eegdu ba’achuu qabdu.
Dhumarratti, waraana fi poolisii federaalaa, poolisii Oromiyaa, kan magaalaa Finfinnee fi Dirre Dhawaa, akkasumas poolisoota naannoo Hararii keessa kan jirtan ilmaan Oromoo, meeshaa diinaa baattanii ergama diinaa fudhattanii maatii keessan ajjeesaa fi mana ummata keessanii gubaa kan jirtan gocha diinummaa kana dhiistanii qawwee diinni isinitti kenne gara diina keessaniitti gara galchitanii akka ummata keessaniif dhaabbatan, gaachana Oromoo fi Oromiyaa kan tahe Waraana Bilisummaa Oromootti makamtanii qabsoo haqaa akka geggeessitan Qeerroon Bilisummaa Oromoo gad jabeessee isiniif dhaama. Miliishoonni fi kallattii adda addaatiin diinaaf ergamaa kan ooltanis dhaamsa kana dhageessanii akka gara qabsoo haqaatti deebitan waamicha isiniif goona.
Akkasuma Mootummoonni Gamtooman UN, Gamtaan Afirikaa AU, Gamtaan Awurooppaa EU, fi Dhaabileen Mirga namoomaaf falmiitan kanneen akka Human rights Watch, Amnesty International, fi kkf gocha Mootummaan Paartii Bilxginnaa Oromiyaafi Lammilee ishee irratti rawwaacha jiruuf xiyyeeffannoo akka kennitan Qeerroon Bilisummaa Oromoo waamicha isiif godha.